दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी- ‘हामी दुई जना एउटै पार्टीमा रहन्नौं’ – Dainiki Sarokar
२०७७ श्रावण १६, शुक्रबार १९:२७
काठमाडौं। ‘आज प्रस्ताव तयार पारौं’ ।
प्रचण्डले भने, ‘मलाई घाँटी दुखेको छ । आज आउन सक्दिनँ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग फोन कुरा गर्दा केही सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यसँगै थिए।
‘त्यसो भए ठीक छ, आराम गर्नुस्’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बेसार पानी धेरै खानुस् । म कम बोल्छु र त बेला बेलामा घाँटी दुख्छ । तपाई् त झन् धेरै बोल्नु हुन्छ।’
प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको बताएका थिए। स्रोत भन्छ,‘प्रधानमन्त्रीले व्यंग जस्तै गर्नु भयो।’
त्यसपछि फोनमै, दुई अध्यक्षबीच सोमबार भेट्ने सहमति बन्यो।
तर, प्रचण्ड गएको सोमबार बालुवाटार गएनन् ।
निर्धारित समयमा प्रचण्ड नपुगेपछि बालुवाटारबाट खुमलटार फोन गयो ।
दाहालले भने, ‘घाँटी झनै दुखेको छ।’
‘को-को नेता प्रचण्डकोमा छलफलका लागि पुगे भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नहुने कुरै भएन’, स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको फोन त्यतिबेला पुगेको थियो, जतिबेला प्रचण्ड आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको खवर बालुवाटार पुगेको थियो।’
यसलाई ओली पक्षले प्रचण्डले दुई अध्यक्षको भेट छल्न खोजेको रूपमा बुझ्यो।
फेरि दुई अध्यक्षबीच हिजो मंगलबार ९ बजे बैठक बस्ने सहमति भयो।
अध्यक्षद्वयबीच भेट हुने भएपछि महासचिव विष्णु पौडेल ९ वजे अघि नै बालुवाटार पुगे।
तर, प्रचण्ड बालुवाटार गएनन्।
साढे ९ बजेसम्म प्रचण्ड बालुवाटार नपुगेपछि प्रचण्डको छोरी गंगा दाहालकोमा बालुवाटारबाट फोन गयो । स्रोत भन्छ, ‘पटक पटक गंगाको फोन उठेन।’
१० बजेतिर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं फोन गरे।
प्रचण्डले भने, ‘भ्याइन्छ, भ्याइन्छ’।
प्रधानमन्त्रीले भने,‘तपाईंको कुरा बुझेँ। एउटा कुरा बुझ्नुस् सचिवालय बैठक नबसी स्थायी कमिटी बस्दैन।’
प्रचण्डले फेरि भने, ‘भ्याइन्छ, भ्याइन्छ।’
बालुवाटार निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बीचको यो संवाद बुझ्न साउन ३ गते फर्कनु पर्छ। त्यो दिन सचिवालयको बैठक बसेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताब गरेका थिए। र, त्यो प्रस्तावलाई सचिवालयले पारित गरेको थियो। महाधिवेशन गर्ने भए, माधव नेपाल लगायतका सचिवालय सदस्यले ‘विस्तृत प्रस्ताव’ ल्याउन भने ।
त्यो ‘विस्तृत प्रस्ताव’ अध्यक्षद्वयले बनाउने र, साउन ४ गते सचिवालय बैठक राखेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने। अनि, त्यसलाई स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने। ओली निकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच सचिवालय बैठक राखेर मात्र स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने सहमति बनेको थियो।’
तर, साउन ४ गतेको सचिवालय बैठक प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेका थिए। त्यसैले स्थायी कमिटी बैठकअघि सचिवालय बैठक राख्न प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग ‘भ्याइन्छ, भ्याइन्छ’ भनेका थिए ।
प्रचण्डले ‘भ्याइन्छ’ भन्दै भेट्न आउने कुरालाई घुमाउरो तरिकाले इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईं आउने कि नआउने ? नआउने भए म बैठक रद्ध गरिदिन्छु।’
प्रचण्डले भने, ‘म आँउछु अनि सल्लाह गरौँला।’
नजिकै रहेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै भने, ‘सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर आक्रमण गर्ने, राजीनामा गर्न स्थायी कमिटीले अनुरोध गर्ने र अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आव्हान गरौँ भन्ने अनि भाँडभैलो मच्चाउने यही हो योजना।’
फोन राखिसकेपछि त्यहाँ उपस्थित केही सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका नेताहरूसमक्ष प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले यहाँ आउनै आलटाल गर्ने, समय गुज्रियो भनेर स्थायी कमिटीको बैठकमा मलाई प्रवेश गराउने। शुरूमा कोरोना, बाढी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने। त्यसपछि सरकार र पार्टीमा एजेण्डा लैजाने। अनि ..’
नजिकै रहेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै भने, ‘सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर आक्रमण गर्ने, राजीनामा गर्न स्थायी कमिटीले अनुरोध गर्ने र अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आव्हान गरौँ भन्ने अनि भाँडभैलो मच्चाउने। यही हो योजना।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘महासचिव ज्यू, आजको बैठक स्थगित गर्नुस्।’
त्यसपछि महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक स्थगित भएको कुरा साढे १० बजे सार्वजनिक गरे।
बैठक स्थगित भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि स्थायी कमिटीको बैठकका लागि बालुवाटार आउन लागेका नेताहरूबीच हल्लीखल्ली भयो। प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एक छिन त खुमलटार जाने कि बालुवाटार जाने भयो।’
बैठक स्थगित भए पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरू बालुवाटारमा भेला हुन थाले।
यही बीचमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको फोन गयो।
स्रोत भन्छ, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आउनुस् छलफल गरौं।’
बरु स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवासको हल भित्र बसे। रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरू जसरी पनि बैठक गर्नुपर्छ भन्दै थिए।
स्रोत भन्छ, महासचिवले प्रचण्डलाई सिधै भने, ‘यो के तमासा गरेको ? यहाँ तमासा गर्ने होइन। खुमलटारमा निर्णय गरेर यहाँ आउनु भएको हो भने जानुस् पार्टी फुटाउनुस्। तमासा नगर्नुस् । होइन भने छलफलका लागि भित्र आउनुस्।’
प्रचण्ड नगएपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रचण्डलाई फोन गयो।
तर, प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि गएनन्।
बारम्बार छलफलका लागि बोलाइँदा पनि करीब डेढ सय मिटर भित्र नगएपछि महासचिव विष्णु पौडेल आफैं प्रचण्ड-नेपाल समूह बसेको हलमा गए।
महासचिवले जंगिदै भनेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न तयार भए।
महासचिव प्रधानमन्त्री निवास फर्किए।
केहीबेरमा झलनाथ खनाललाई लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठाँउमा पुगे।
प्रधानमन्त्री निवासको पहिलो तलामा प्रधानमन्त्री, महासचिव र ईश्वर पोखरेल बसिरहेका थिए।
त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै प्रचण्डले भने, ‘आजको बैठक नरोक्नु पर्ने।’
प्रचण्ड-खनाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘अध्यक्षलाई त प्रधानमन्त्रीले करिब करिब हप्काउनु भएछ। तपाईं छलफल गरौं भन्दा सञ्चो छैन भन्ने। सञ्चो नहुन सकिन्छ। म पनि बिरामी हुन्छु। तर, मसँग बिरामी छु भेट्न सक्दिन भन्ने अनि गुटको भेला चाहिँ जति पनि गर्न सक्ने?’
प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रचण्ड-खनाल निकट स्रोत भन्छ, ‘कसले रोकेको सचिवालय बैठक ? सचिवालय बैठकमा के सहमति भएको थियो ? बैठकले गरेको सहमति पालना गर्नु पर्दैन? छलफल गरौं भन्दा नआउने अनि बाहिर मैले बैठक रोक्यो भनेर प्रचार गर्ने ? तपाईंहरू गए हुन्छ। खुमलटारमा गुटको भेला गरिरहनु भएको छ। गर्नुस् जानुस।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै दाहाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘हलमा कोही कताका कोही कताका साथीहरू होलान खुमलटारको सट्टा बालुवाटारको चिया खुवाएर विदा गर्नुस्।’
स्रोत भन्छ प्रचण्ड र झलनाथ खासै बोलेनन्।
बरु प्रधानमन्त्रीले ठाडो चुनौती दिए, ‘तपाईंलाई आफूसँग बहुमत छ भन्ने लागेको छ भने जे जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्। तर, याद गर्नुस् आज खुमलटारको सट्टा बालुवाटारमा बसेको तपाईंको गुटको भेलालाई स्थायी कमिटीको बैठक भन्नु भयो भने, हामी दुई जना एउटै पार्टीमा रहन्नाैँ। विचार गर्नुस्।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै दाहाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘हलमा कोही कताका कोही कताका साथीहरू होलान खुमलटारको सट्टा बालुवाटारको चिया खुवाएर बिदा गर्नुस्।’
त्यसपछि, हलमा फर्किए लगत्तै दाहालले भेलालाई ‘अनौपचारिक छलफल’को रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका थिए।
सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडिलाई राप्रपाको सहयोग
संसदीय समितिका चार निर्देशन